व्यवसाय प्रवर्धनका लागि मेला सहयोगी हुनेछः महासचिव अधिकारी – Arthik Awaj
व्यवसाय प्रवर्धनका लागि मेला सहयोगी हुनेछः महासचिव अधिकारी
By आर्थिक आवाज २०७४ पुष २४ गते सोमबार ०३:०३ मा प्रकाशित
निजी क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा सफल औद्योगिक राष्ट्रिय व्यापार मेला हुँदैछ । यही पुस २७ देखि माघ ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलाका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संघमा महासचिव तथा प्रचार–प्रसार संयोजक दामु अधिकारीसँग आर्थिक आवाजका लागि गरिएको कुराकानीः
हामीले सकेसम्म मेलालाई बिगतका वर्षहरुमा भन्दा परिस्कृत र परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेका छौं । सफल राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामार्फत यस क्षेत्रका स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यस पटक मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुको बृहत प्रदर्शनी तथा बिक्री पनि मेलाको आकर्षण बन्नेछ । पोखरा इञ्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले मेलामा प्रदर्शन गर्ने रोबोटिक हन्ड्रेड हाउस (भूत घर) पनि मेलाको थप आकर्षण बन्नेछ ।
मेलाका आकर्षणमा औद्योगिक तथा व्यापार मेला, हस्तकला, कृषि, पुष्प, अटो मेला, सूचना तथा प्रविधिहरुको प्रदर्शनी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको गतिविधीहरुको प्रदर्शनी रहनेछ । मेलामा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा घरायसी सामान, लत्ताकपडा, श्रृंगारका सामानहरुको विक्री वितरण हुनेछ । लोकदोहोरी प्रतियोगिता, नेपालका ख्यातिप्राप्त व्याण्डहरुको सांगीतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य र रत्यौली प्रतियोगिता पनि मेलाको आकर्षण बन्नेछ । मेलामा उपस्थित दर्शकलाई हामीले भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछौं । पोखरा तथा समग्र देशकै औद्योगिक, कृषिजन्य उत्पादन, हस्तकलाका उत्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत कृषिजन्य उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा सघाउन मेला सफल हुनेछ । मेला प्रदेश नम्बर ४ को व्यवसाय बिस्तारको सम्भावनाको खोजी गर्न समर्पित हुनेछ । मेलाबाट पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्नेछौं ।
मेलामा कति वटा र कस्ता–कस्ता स्टल रहन्छन् ।
मेलामा डोममा निर्मित विशेष प्रकारका स्टलहरु सहित २ सय ८० स्टल रहनेछन् । तीमध्ये डोममा ७८, रेष्टुरेष्ट १२, अटो ४५, मेड इन नेपाल पेभेलियनमा १०, पोखराका उत्पादन, पर्यटन, कृषि तथा हस्तकलामा ४०, प्mलोरिकल्चरमा ८ र बाँकी साधारण स्टल रहनेछन् । मेलाको २ लाख दर्शकहरुले अवलोकन हामीले विश्वास लिएका छौं । मेलाका सबै स्टलहरु बुकिङ भइसकेका छन् । नेपाली उत्पादनलाई हामीले विशेष महत्व दिएका छौं । व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आउने वस्तुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसबाट व्यापार भन्दा पनि व्यवसाय प्रवद्र्धन होस भन्ने हामीले चाहेका हौं । धेरै भन्दा धेरै उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकता दिएर स्टल व्यवस्थापन गरेका छौं ।
सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुभएको छ ?
मेला स्थलमा कडाइका साथ सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइएको छ । विभिन्न स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गर्दैछौं । विभिन्न ठाउँबाट सिसी क्यामरामार्फत २४सै घन्टा निरीक्षण गरिनेछ । बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थापन उपसमितिले सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाउन सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहित तयारी पुरा गरेको छ । यसका लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँग पनि सहकार्य गरिएको छ ।
मेलाको प्रचार–प्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ?
मेला सफल पार्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो प्रचार–प्रसार मानिन्छ । प्रचार–प्रसारलाई यसपटक व्यवस्थित रुपमा गरिरहेका छौं । पोखरामा मात्र सीमित नभइ आसपासको क्षेत्रमा पनि मेलाको प्रचार–प्रसार गर्दै मेला अवलोकनका लागि पोखरा आउन आह्वान गरेका छौं । पोखराबाट प्रशारण तथा प्रकाशन हुने टेलिभिजन, एफ.एम, पत्रपत्रिका, अनलाइनसँग हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । राािष्ट्रय लगायत सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमको पनि प्रचार–प्रसारमा पूर्ण साथ छ । प्रचार प्रसारमा प्रविधिको भरपुर सदुपयोग भइरहेको छ ।
मेलाको आम्दानीलाई कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ ?
मेलाबाट ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी खर्च ६० लाख कटाउँदा ३० लाख रुपैयाँ बचत हुने हाम्रो अनुमान छ । हामीले हरेक वर्ष मेलाबाट भएको आम्दानीलाई सामाजिक क्षेत्रमा सकेसम्म योगदान पु¥याउँदै आइरहेका छौं । यस पटक हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र यसअघीका मेलाबाट भएको आम्दानी सदुपयोग गर्दैै मेलास्थलमा आकर्षक डोम निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । प्रदर्शनी केन्द्रमा अहिले एउटा मात्र डोम छ भने अब दुई वटा डोम भएपछि अन्य कार्यक्रम तथा गतिविधिका लागि सजिलो हुनेछ । यो पोखराको आवश्यकता पनि हो ।
मेला सफल पार्न व्यावसायिक सहकार्य कसरी भइरहेको छ ?
मेलालाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले विशेष सहयोग गरेको छ भने सफल दूध, हुण्डाई र कुलप्याण्ड स्मार्ट फोनको मुख्य प्रायोजन छ । नेपाल पर्यटन वोर्ड तथा ग्लोबल आइएमइ बैंक लिमिटेडको प्रवद्र्धनमा मेला हुन लागेको हो । मेलामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, अर्घाखाँची सिमेण्ट, फर्निचर ल्याण्ड, हरपल फुड प्रालिको हरपल चामलको सहप्रायोजन र विजय डिष्टिलरी र यति ब्रुअरी प्रालिको विशिष्ठ प्रायोजन छ । पोखरा इन्टरनेट प्रालिको क्लियर टिभी मिडिया पार्टनर रहेको मेलामा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड वीमा प्रायोजक छ । अतिथी रिसोर्ट र माउण्ट कैलास रिसोर्ट पोखरा मेलाको अफिसियल होटल छन् । मेला सम्पन्न गर्न अन्य थुप्रै व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य भइरहेको छ । सबैको साथबाट नै मेलाले सफलता पाउने हो ।